Shiinaha S308 Soosaarka iyo Warshadda Mashiinka sumadda weelka wareega ee xawaaraha sare leh | S-conning
Lagu dabaqi karo noocyo kala duwan oo xoqid ah (noocyo kala duwan oo ah amboloji, dhalooyinka dareeraha ah ee afka, fijaannada iwm), oo dhexroorkeedu yahay 10mm-30mm (ama cabbirka la habeeyay)
Khadka wax soo saarka dawada ee sumadda sumadda weelka S308 ee Xawaaraha Sare leh wuxuu ku hubaysan yahay tiknoolajiyada cusub ee ugu dhakhsaha badan uguna xakamaynta netcon (ikhtiyaar). Hal guji oo keliya shaashaddiisa hal-taabashada ah, waxaad si fudud ugu hagaajin kartaa goobaha kala duwan ee alaabtaadu u baahan tahay.
- Qaadashada xawaaraha sare (Japan / France / USA)) nidaamka calaamadeynta shaqaalaha;
- Lagu dabaqi karo noocyo kala duwan oo xoqid ah (noocyo kala duwan oo ah noocyo ambooyin ah. Dhalooyinka dareeraha ah ee afka, fijaannada iwm), dhexroorkeedu yahay 10mm-30mm (ama cabbirka la habeeyay);
- Nidaamka calaamadeynta saxda ah ee saxda ah, oo leh dulqaad sumcad 1mm;-Xawaaraha deggan:> 400 ~ 800 dhalo / daqiiqad;
-Qiyaasta dhaawaca ee ka hooseeya 1 / 300,000;
- Nidaamka xakamaynta caqliga si loo hubiyo in uusan duuduubku jirin marka la calaamadeynayo iyo in aysan jirin goobooyin hawo ah oo loogu talagalay calaamadaha hufan;
- Nidaamka kormeerka ee maskaxda badan, oo leh iskudhafyo qumman oo xawaare sare, sax ah, xasillooni iyo kalsooni
- Daawaha aluminium ee xoogga badan, oo leh muuqaal wanaagsan iyo u hoggaansamida shuruudaha qeexidda ee cGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS iyo CE.
Dejinta ugu Fiican
- Rotary & Roller uwareegis leh seddex meelood si loo hubiyo waxqabadka saxda ah ee xasilinta xawaaraha sare;
- Xiddigaha diida qalabka taayirada leh waxay si sax ah u ogaan karaan ugana tirtiri karaan qaladaadka qalabka agabyada leh; markay xawaaraha sare ku shaqeynayaan.
- Qalabka baaritaanka fiidiyowga si loo bixiyo shaqooyin kala duwan oo lagu ogaanayo: Ogaanshaha calaamadda, ogaanshaha dheecaanka, iyo ogaanshaha lambarka daabacaadda, alaabada aan tayada lahayn ayaa laga saari doonaa oo dib loo warshadeyn doonaa
- Wuxuu dooran karaa mashiinka kuleylka kulul ee xawaaraha sare leh, daabacaadda kuleylka kuleylka ama mashiinka daabacaadda inkjet si loo xaqiijiyo sireed si isku mid ah;
- Taageerida qalabka socda xaaladdiisa iyo macluumaadka alaarmiga waxay noqon karaan kuwo si dhab ah uga tarjumaya nidaamka.
Mashiinkayaga wadayaasha hawlwadeennada ah wuxuu keenayaa calaamadeynta saxda ah ee xawaaraha sare leh. Qalab hagaajiyeha gacan-ku-hayaha si fudud loo heli karo iyo hagaajinta tareenka dhinac isku xidha ayaa u oggolaanaya in ka badan "waqti-dheer" khadkaaga wax soo saar! S308 waxaa loo isticmaalaa dhammaan shixnadaha oo dhan sida dawooyinka, alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed, cuntooyinka, fiitamiinnada, is qurxinta, iyo kiimikooyinka, halkaasoo kalsoonida ugu fiican ee fasalka ay tahay waajibaadka waxsoosaar wax ku ool ah.
Dayactirka waa fududahay oo hufan.
Xakamaynta isdabajooga isdabajooga isdabajooga casriga ah wuxuu hubiyaa xasiloonida xawaaraha iyo rate 0.5mm heerka khaldan.
Tilmaamaha qaybta tareenka ee xariiqda wax soo saarista cirbadeynta tallaalkan waxaa lagu sameeyaa aluminium tayo sare leh oo lagu daboolay balaastikado warshad adag leh si loo hubiyo calaamadeynta saxda ah iyo ilaalinta alaabta, iyadoo alaabada macaamiisha laga dhigayo mid soo jiidasho leh oo xaalad fiican ku jirta.
Saldhigga Labeler-ka wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah si aan u hubino ka hortagga miridhku. Naqshaddani waxay hubinaysaa mashiinka iyo fayadhowrka goobta wax soo saarka oo la dayactiray kaas oo loogu talagalay heerarka GMP.
Giraangiradu waxay mashiinka ka dhigayaan kuwo la qaadi karo, oo ku habboon marka loo wareego khadadka wax soo saarka ee kala duwan. Awooddan mobilada ee taageerada leh waxay kordhisaa qiimaha maalgashigaaga.
Cabbir (L) 2208 x (W) 1420 x (H) 1948mm
Cabbirka weelka -3010-30mm
Xaqiijinta shaybaarka Mm 0.5mm
Hore: S921 sumadaha tuubada jilicsan ee xawaaraha sare leh
Xiga: S307 Mashiinka calaamadeynta weelka xawaaraha sare
Sheet Price for Shiinaha Factory Automatic Glass B ...
Factory Price Shiinaha Cadayga qasidda firdhi ...
Factory Jaban Hot Shiinaha Line Production ...
Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Top Iyo Labeler Labeler, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha,